Bible Mu Nsɛm Nyinaa Gyina Hɔ Ma Biribi Kɛse a Ɛbɛba Daakye Anaa? | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Cambodian Dangme English Ewe French Ga Greenlandic Italian Kimbundu Kwangali Kwanyama Lingala Maltese Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Ngabere Nyaneka Nzema Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Sepedi Sesotho (Lesotho) Spanish Swati Tahitian Totonac Tsonga Tswana Twi Umbundu Venda Xhosa Zulu
Bere bi a atwam no na yɛtaa ka wɔ yɛn nwoma ahorow mu sɛ Bible mu nsɛm bi gyina hɔ ma biribi kɛse a ɛbɛba daakye. Nanso nnansa yi yɛntaa nka saa. Adɛn ntia?
September 15, 1950, Ɔwɛn-Aban no kyerɛkyerɛɛ mu sɛ, sɛ Bible ka onipa, asɛm, anaa ade bi ho asɛm a, ɛtɔ da bi a ɛgyina hɔ ma obi anaa biribi kɛse a ɛbɛba daakye. Bere bi a atwam no, na yɛn nwoma ahorow taa ka sɛ mmarima ne mmaa anokwafo te sɛ Debora, Elihu, Yefta, Hiob, Rahab, Rebeka, ne afoforo pii gyina hɔ ma Kristofo a wɔasra wɔn no anaa “nnipakuo kɛseɛ” no. (Adiyisɛm 7:9) Ɛho nhwɛso ni. Yɛkaa sɛ Yefta, Hiob, ne Rebeka gyina hɔ ma Kristofo a wɔasra wɔn no, ɛnna Debora ne Rahab nso gyina hɔ ma nnipakuw kɛse no. Nanso, nnansa yi yɛnyɛ saa ntotoho no bio. Adɛn ntia?
ƐGYINA HƆ MA BIRIBI
Twam dwan a tete Israelfo de bɔɔ afɔre no gyina hɔ ma biribi.—Numeri 9:2
ADE NO ANKASA
Paulo kaa sɛ Kristo ne “yɛn twam dwan.”—1 Korintofoɔ 5:7
Kyerɛwnsɛm no kyerɛkyerɛ sɛ nnipa bi a Bible ka wɔn ho asɛm no gyina hɔ ma obi anaa biribi kɛse a ɛbɛba daakye. Nhwɛso bi ni. Ɔsomafo Paulo kaa mmaa mmienu bi ho asɛm wɔ Galatifoɔ 4:21-31, na ɔkaa sɛ ‘wɔgyina hɔ ma biribi.’ Ɔbaa a ɔdi kan no ne Hagar, Abraham afenaa no. Paulo kaa sɛ Hagar gyina hɔ ma Israel man a na Mose Mmara aka wɔn afam Yehowa ho no. Ɔbaa a ɔto so mmienu no ne Sara, Abraham yere a na ɔyɛ “ɔdehyeɛ” no. Ná Sara gyina hɔ ma Onyankopɔn yere; ɛno ne Onyankopɔn ahyehyɛde no fã a ɛwɔ soro no. Paulo san kaa sɛ nneɛma pii di nsɛ wɔ Melkisedek a ɔyɛ ɔhene ne ɔsɔfo no ne Yesu ho. (Hebrifoɔ 6:20; 7:1-3) Bio, Paulo de odiyifo Yesaia ne ne mmabarima no totoo Yesu ne Kristofo a wɔasra wɔn no ho. (Hebrifoɔ 2:13, 14) Yehowa na ɔde honhom kaa Paulo ma ɔkyerɛw nsɛm yi nyinaa, enti yɛgye di sɛ Bible mu nsɛm a ɛgyina hɔ ma biribi no yɛ nokware.
Nanso sɛ Bible ka sɛ onipa bi gyina hɔ ma biribi mpo a, ɛnsɛ sɛ yɛnya adwene sɛ asɛm biara a ɛsii wɔ onipa no asetena mu no gyina hɔ ma biribi kɛse bi a ɛbɛba daakye. Ɛho nhwɛso ni. Paulo kaa sɛ Melkisedek gyina hɔ ma Yesu. Nanso, Paulo anka bere a Abraham dii ahemfo nnan so nkonim na Melkisedek de paanoo ne bobesa brɛɛ no no ho asɛm. Biribiara nni Bible mu a enti ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ sɛ saa asɛm no gyina hɔ ma biribi.—Genesis 14:1, 18.
Kristo wu akyi no, akyerɛwfo bi dii mfomso kɛse. Ɛrekame ayɛ sɛ wɔkyerɛe sɛ Bible mu asɛm biara gyina hɔ ma biribi. Nwoma bi ka Origen, Ambrose, ne Jerome nkyerɛkyerɛ ho asɛm sɛ: “Wɔhwehwɛɛ biribi a ɛgyina hɔ ma biribi wɔ asɛm biara a wɔaka wɔ Bible mu ho, na wɔnyaa bi. Ná wɔsusu sɛ asɛm ketewa biara anaa tebea biara mu no, nokwasɛm bi a ahintaw wom a ɛsɛ sɛ wɔhwehwɛ mu. . . . Agyenkwa a wɔanyan no no yii ne ho adi kyerɛɛ asuafo no anadwo bi a na wɔreyi mpataa. Nnipa binom susu sɛ mpataa 153 a na asuafo no ayi no gyina hɔ ma biribi!”—The International Standard Bible Encyclopaedia.
Ɔkyerɛwfo foforo a ne din de Augustine a ofi Hippo kyerɛkyerɛɛ mu sɛ atoko paanoo nnum ne mpataa nketewa mmienu a Bible ka sɛ Yesu de maa mmarima 5,000 dii no gyina hɔ ma biribi. Ɔkaa sɛ atoko paanoo nnum no gyina hɔ ma Bible mu nwoma nnum a ɛdi kan no. Saa bere no na nkurɔfo susu sɛ awi (ayuo) yɛ papa sen atoko. Ná wɔrepɛ akyerɛ sɛ “Apam Foforo” no yɛ papa sen “Apam Dedaw” no. Afei nso, ɔkyerɛɛ mu sɛ mpataa mmienu no gyina hɔ ma ɔhene ne ɔsɔfo bi. Nwomanimfo foforo nso kyerɛkyerɛɛ Esau abakan a Yakob de ade kɔkɔɔ, anaa abom kyɛnsee mã tɔe no mu. Ɔkaa sɛ ɛgyina hɔ ma Yesu mogya kɔkɔɔ a ɔde tɔɔ ɔsoro anidaso maa adesamma no!
Sɛ ɛyɛ den ma wo sɛ wobɛgye saa nkyerɛkyerɛmu no atom a, ɛnde hu sɛ asɛm wɔ ho. Nnipa rentumi nhu Bible mu asɛm a ɛgyina hɔ ma biribi kɛse ne nea ɛnte saa. Enti, dɛn na ɛyɛ papa sɛ yɛyɛ? Sɛ Kyerɛwnsɛm no ka sɛ onipa bi, asɛm bi, anaa ade bi gyina hɔ ma biribi kɛse a ɛbɛba daakye a, yɛgye tom saa. Nanso, sɛ yɛnni Kyerɛwnsɛm mu nnyinaso biara a, ɛnsɛ sɛ yɛka sɛ Bible mu asɛm bi gyina hɔ ma biribi.
Ɛnde, sɛ yɛkenkan Bible mu asɛm bi a, yɛbɛyɛ dɛn anya so mfaso? Ɔsomafo Paulo kyerɛwee sɛ: “Biribiara a wɔatwerɛ ato hɔ no, wɔatwerɛ ama yɛn nkyerɛkyerɛ, na yɛnam yɛn boasetɔ ne Twerɛnsɛm no mu awerɛkyekyerɛ so anya anidasoɔ.” (Romafoɔ 15:4) Ná Paulo rekyerɛw tete Kristofo a wɔasra wɔn no akyerɛ wɔn sɛnea wɔbɛtumi anya Bible mu nsɛm so mfaso. Nanso efi saa bere no, Kristofo nyinaa a “nnwan foforɔ” no ka ho, anya asuade a ɛwɔ Kyerɛwnsɛm no mu so mfaso.—Yohane 10:16; 2 Timoteo 3:1.
Enti Bible mu nsɛm dodow no ara mfa Kristofo a wɔasra wɔn ne “nnwan foforɔ” no nkutoo ho. Saa ara nso na ɛmfa Kristofo a wɔtenaa ase bere pɔtee bi mu nko ara ho. Mmom, Onyankopɔn asomfo a wɔtenaa ase tete ne nnɛ nyinaa anya Bible mu nsɛm so mfaso. Sɛ yɛhwɛ Hiob sɛɛ a, amane a ohui no nnyina hɔ mma amanehunu a Kristofo a wɔasra wɔn no faa mu wɔ Wiase Ko I no mu nkutoo. Mmarima ne mmaa a wɔsom Onyankopɔn a wɔasra wɔn ne “nnwan foforo” no mufo pii ahu amane te sɛ Hiob, na wɔanya saa asɛm a wɔsuae no so mfaso. Wɔahu nea “Yehowa maa ɛfirii mu baeɛ, sɛ Yehowa wɔ ayamhyehyeɛ ne mmɔborɔhunu.”—Yakobo 5:11.
Ɛnnɛ yɛhu mmaa mpanyimfo anokwafo a wɔte sɛ Debora wɔ yɛn asafo ahorow mu. Saa ara nso na yɛhu mmerante a wɔyɛ asafo mu mpanyimfo a wɔnim nyansa te sɛ Elihu. Yɛhu akwampaefo a wɔyɛ nsi na wɔwɔ akokoduru te sɛ Yefta. Yɛsan nso hu mmarima ne mmaa anokwafo a wɔwɔ abotare te sɛ Hiob. Yɛda Yehowa ase paa sɛ ɛnnɛ wama yɛanya “biribiara a wɔatwerɛ ato hɔ,” na yɛnam “Twerɛnsɛm no mu awerɛkyekyerɛ so anya anidasoɔ”!
Wei nti ɛnsɛ sɛ yɛhwehwɛ nea Bible mu asɛm biara gyina hɔ ma. Mmom, seesei yɛn nwoma ahorow twe adwene si nneɛma pa a yɛbɛtumi asua afi Kyerɛwnsɛm mu no so.
Nsɛmmisa a Efi Akenkanfo Hɔ—March 2015